Dowladda Iswiidhan oo ciidanka booliska u qoondeeysay adduun gaaraya 7,1 milyaardi | Somaliska
Ra’iisal wasaaraha dowladda Iswiidhan Stefan Löfven iyo wasiirkiisa cadaaladda iyo arrimaha gudaha oo maanta shir jiraa’id ku qabtay degmadda Eskilstuna, ee duleedka magaaladda Stockholm ayaa shaaca ka qaaday in dowladda ay kordhineeyso miisaaniyadda ay ugu talagashay ciidanka ku howlan ammaanka ee booliska dalka.
Miisaaniyadan loo qoondeeyey booliska ayaa la qorsheeyey sanadka la adeegsado saddexda sanno ee soo socota iyadoo laga bilaabayo sanadka inugu soo fool ldhe ee 2018-ka. Ra’iisal wasaaraha oo ka hadlayey sababta dowladda . ugu kordhineeyso mushaarka ciidanka ayuu tilmaamay in salka ay ku heeyso amni xummadda meelo badan oo dalka ah saameeysay, gaar ahaan dilka iyo kooxaha is baacsanaya oo soo batay mudooyinkii ugu dambeeysay.
” Si aad u xun ayey abuurtay deganaan la’aan dadka ag degan meelahaas, waana mid aan la aqbali karin. Waa inaan dhibka si adag uga hortagnaa oo aan qabanaa. Falal dambiyeedyo badan ayaa kiisaskooda la laa bi’iyey , waxaa la is weydiinayey ma waaneey booliska ku fileyn howshan ama aaney heeysan fursad ay ku qabtaan, waa inaan kor u qaadnaa heerka dhiiragelineed” ayuu yiri Löfven.
Urrurka mideeya booliska ayaa aad u soo dhaweeyey miisaaniyada loo qoondeeyey booliska sanadaha soo socda, waxaana ay ku tilmaaameen talaabo loo baahan yahay oo muhiim u ah ah hagaajinta amaanka sidaana waxaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay Lena Nitz oo madax u ah urrurkaasi.
Mudooyinkii ugu dambeeyey ayaa meelo badan oo dalka ka mid ah gaar ahaan magaalooyinka waaweyn ayaa waxaa ka dhacay falal dembiyeedyo iyo dilal kala duwan oo galaaftay nolosha du badan kuwa ku lug leh falalkaasi. Mid ka mid ah dhacdooyinkaas ayaa magaaladda Göteborg waxaa uu sababay dilka wiil soomaali ah oo 8 jir ah, kaas oo qaraabo salaan u yimid.